31 Mei 2012 di SUHAKAM : Menyerahkan Memorandum Tolak Politik Samseng
Outrage Over 'Army Website' Encouraging Illegal Hunting
A Most Bizarre Mystery Solved!
မင်းရို့အားလုံးကို ပထဝီမြေကြီး က ဒဏ်ခတ်ပါစေ
Assalamualaikum & Salam Mesra,<br>Hello All,<br>Lama betul tak
Sept 1963 HQ of 3rd Malaysian Infantry Brigade at the Air Strip Camp which is located about3km from Bentong Town
Usul Tergempar Isu Scorpene di bawah Peraturan Mesyuarat 18 (1) & (2) oleh Yang Berhormat Nurul Izzah Anwar-MP Lembah Pantai
International Community needs to pressure the Myanmar Government to stop the racial profiling, derogatory name calling and Hate Speeches
Gambar-gambar di SUHAKAM semasa penyerahan Memorandum Tolak Politik Samseng.
One hunter even boasted of his kills despite being aware of its illegality.
LUMPUR: Animal rights group Traffic claimed today there was an alleged
widespread of illegal hunting by army personnel who even boasted
Posted: 07 Jun 2012 08:11 AM PDT
Posted: 07 Jun 2012 11:01 AM PDT
"Saya yakin Anak mampu himpunkan jumlah yang besar kerana sebelum ini ramai yang dah hubungi saya tanya samaada Anak merancang himpunan atau tidak dan saya rasa inilah masanya," katanya sambil manambah lokasi dan tarikh perhimpunan tersebut akan diumumkan minggu hadapan. -HD
Posted: 07 Jun 2012 04:02 AM PDT
Posted: 07 Jun 2012 06:10 AM PDT
Source: News@MMSY ရခိုင်လူသတ်မှုနဲ့ နိရဉ္စရာသတင်းဌာနပတ်သက်မှု
ရခိုင်ပြည်နယ် တောင်ကုတ်မှာဖြစ်သွားတဲ့ စုပြုံလူသတ်မှုရဲ့အစကဘာလဲ?
မြန်မာအစိုးရ မီဒီယာက မွတ်စလင်ကုလားဆိုပြီးကြေညာတာကနောက်မှပါ။ ရခိုင်လူ သတ်မှုဖြစ်အောင် အဓိက မှိုင်းတိုက်ပေးခဲ့တာကတော့ ရခိုင်သတင်းဌာန နိရဉ္စရာပါပဲ။
ဒီသတင်းဌာနဟာ ရခိုင်လူသတ်မှုအတွက် အဓိက ပထမ တာဝန်ရှိပြီး ဒီလူသတ်မှုအ တွက် တာဝန်ယူရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအချက်ကို မှေးမှိန်သွားစေလို့ မဖြစ်ပါဘူး။ ဘာ ကြောင့်လဲဆိုရင် သတင်းမီဒီယာတခုရဲ့ပါဝါကိုကိုင်ထားပြီး တာဝန်ယူမှုနဲ့ သတင်းမီ ဒီ ယာကျင့်ဝတ်မရှိလို့ အပြစ်မဲ့ ပြည်သူ ၁၁ ဦး အသက်ပေးခဲ့ရတာပါ။
ရ၀မ်ဒါလူမျိုးတုန်း သတ်ဖြတ်မှုမှာ ရေဒီယို အော်ပ ရေတာ ကိုင်ပြီး လူသတ်စိတ်ကြွအောင် မှိုင်းတိုက်ပေးခဲ့ တဲ့ ဟူတူလူမျိုး စစ်ရာဇ၀တ်ကောင်တွေရဲ့လုပ်ရပ်နဲ့ အလား သဏ္ဍာန်အတူတူပါပဲ။
နိရဉ္စရာသတင်းဌာနက ဘယ်လို လူသတ်မုန်းတီးစိတ် မှိုင်းတိုက်ခဲ့လည်းဆိုတာ သုံးသပ် ပြပါမယ်။
နိရဉ္စရာမှာ တင်ပြခဲ့တဲ့ သတင်း ၄ ပုဒ်ဟာ လူသတ်စိတ်ကြွစေတဲ့ သတင်းတွေ ပါ။ ဓားသွားကို သွေးပေးခဲ့တဲ့ ကလောင်သွား တွေပါပဲ။
အဓိကချပြသွားတဲ့ အိုင်ဒီယာ တွေကတော့
(၁) အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်၊ မွတ်စလင်မ်၊ ကုလား ၃ ယောက် ရခိုင်အမျိုးသမီးတယောက် (၁၆ နှစ်လို့ မှားယွင်းစွာ ဖော်ပြခဲ့) ကို အဓမ္မပြုကျင့်ပြီး ရက် ရက်စက်စက် လူမဆန်စွာသတ်ဖြတ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အချက်
(၂) မွတ်စလင်မ်တွေဟာ အဲ့ဒီရပ်ရွာမှာ သောင်းကျန်းနေပြီး ရပ်ရွာလူထုကို ခြောက်လှန့် နှောင့်ယှက်နေပေမဲ့ အစိုးရက ဘာမှမလုပ်ပေးတဲ့အချက်ကို ဦးတည်ပြီး
ကုလား၊ မွတ်စလင်မ်၊ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်ဆိုတဲ့ စကားလုံးတွေ ရောထွေးသုံးပြီး ရခိုင်အမျိုးသမီးကို မတရား ရက်ရက်စက်စက်လုပ်သွားတယ်ဆိုပြီး ထပ်ကာထပ်ကာ တင်ပြခဲ့တဲ့အတွက် ရခိုင်လူထုကို ပိုပြီး စိတ်ဆိုးစေ တယ်။ လူမျိုးခြား ဘာသာခြားတွေက ငါတို့ ကို အဲ့ဒီလို စော်ကားနေတယ်ဆိုတဲ့ ဒေါသတွေကို ဆွပေးခဲ့တယ်။ ဒေါသထွက်နေတဲ့ ရခိုင်ပြည်သူတွေဟာ နိရဉ္စရာရောချသလိုပဲ ရိုဟင်ဂျာ၊ ဘင်္ဂလီ၊ မြန်မာမွတ်စလင်မ်၊ ကုလား၊ တိုင်းရင်း သား အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် ဘာမှမခွဲခြားတော့ပဲ ကားပေါ်မှာပါလာတဲ့ မွတ်စလင်မ် မှန်သမျှ ဆွဲချပြီး ရက်ရက်စက်စက် ရိုက်နှက်သတ်ဖြတ်ပါတော့တယ်။ (နိရဉ္စရာသတင်းထုတ်ပြန်ပုံကို ပူးတွဲ ကဏ္ဍတွင်ရှုပါ။)
မီဒီယာကျင့်ဝတ်ဖောက်ပြီး သတင်းဖုံးတာလား တိုက်ဆိုင်တာလားတော့မသိပါ၊ မွတ်စလင်မ်တွေ အသတ်ခံရတဲ့ နေ့ မှာပဲ တောင်ကုတ်ကာ ကားချော်လို့လူ ၈ ယောက်သေတယ်ဆိုပြီး ဖော်ပြခဲ့တယ်။ နောက်ပိုင်း သတင်းတွေ တက်လာမှ ဒီသတင်းပြန်ဖော်ပြတယ်။ ရခိုင်အမျိုးသမီးကိစ္စမှာ ဘာသာရေးကို တငင်ငင်ဖော်ပြခဲ့ပေမဲ့ မွတ်စ လင်မ် အသတ်ခံရတဲ့သတင်းမှာတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကို စုဖွဲ့ ပြီး ရိုက်သတ်တယ်ဆိုပြီး မပြောတာက မသိနားမ လည်လို့အစ္စလာမ်ဘာသာကို ထည့်ရေးမိတာမဟုတ်ဘဲ ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ လူမျိုးရေး မုန်းတီးစိတ်ဆွပေးတယ် ဆိုတာ ထင်ရှားနေပါတယ်။
ပိုပြီးတော့မှ ထူးခြားတာက နိရဉ္စရာသတင်းဌာန ၀ဘ်ဆိုဒ်ဟာ ၂၀၀၅ ကတည်းက ရခိုင်အမျိုးသမီးကေ့စ်နဲ့မှ လူဝင်ကြည့်မှုအများဆုံးဆိုပြီး အောင်ပွဲခံခဲ့ ပါတယ်။ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ မုဒိန်းမှု၊ လူသတ်မှု၊ အဓမ္မလုပ်အား ပေးမှု၊ မြေသိမ်းမှု ပေါင်းစုံဖြစ်နေပေမဲ့ ခုလို အဓမ္မမှုတခုကို ခုတုံးလုပ်ပြီး လူမျိုးရေးဘာ သာရေးတွေရောပြီး နာမည်ကြီး အောင် အမြတ်ထုတ်သွားတာ ပေါ်လွင်နေပါတယ်။
ဒါကြောင့် တကယ်တန်းတော့ ဒီလူသတ်မှုကို မှိုင်းတိုက်ပေးခဲ့တာကတော့ နိရဉ္စရာသတင်းဌာနဖြစ်တဲ့အတွက် အဲ့ဒီသတင်းဌာနမှာ အပြည့်အ၀ တာဝန် ရှိပါတယ်။ ဒီကိစ္စအတွက် နိရဉ္စရာက တနေ့ တချိန်မှာ တာဝန်ယူပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ရခိုင်သတင်းဌာန နိရဉ္စရာသတင်း ဌာနရဲ့မေလ ၂၉ ရက်နေ့ ထုတ် "ရမ်းဗြဲတွင် အသက် ၁၆ နှစ်အရွယ် အမျိုးသမီးငယ် တစ်ဦး မုဒိမ်းကျင့် သတ်ဖြတ်ခံရ" ခေါင်းစဉ်ပါသတင်း တစ်ပုဒ်ထဲမှာတင် လူမျိုးရေး ဘာသာရေးမှိုင်းတိုက်ပေးတဲ့ စာလုံး၊ စာကြောင်းပေါင်းများစွာ ထည့်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီစာကြောင်းတွေကတော့
- " သူမကို မုဒိမ်းကျင့်ပြီး သတ်သွားတာက ကျောက်ထရံကျေးရွာက ကုလား လူငယ် (၃)ဦးဖြစ်တယ်"
နိရဉ္စရာသတင်းဌာနရဲ့မေလ ၂၉ ရက်နေ့ ထုတ် "ရမ်းဗြဲ မုဒိမ်းကျင့် လူသတ်မူ ကျူးလွန်သူ တရားခံ သုံးဦးကို ညတွင်းချင်း ဖမ်းမိ" ခေါင်းစဉ်ပါ သတင်းမှာလည်း လူမျိုးရေး ဘာသာရေး စကားလုံးထပ်ပြီး ရေးသားထားပါတယ်။
မေလ ၃၁ ရက်နေ့ ထုတ် "မသီတာထွေး မုဒိမ်းကျင့် သတ်ဖြတ်ခံရမူကို မကျေနပ်သော ရမ်းဗြဲလူထု ဆန္ဒပြ" ခေါင်းစဉ်ပါသတင်းမှာ
ဇွန်လ ၂ ရက်နေ့ ထုတ် "ကျောက်ဖြူလူထု မိုးရေကြားထဲ မသီတာထွေးအတွက် သွားရောက် ဆန္ဒပြ"ပါသတင်းမှာ
Posted: 07 Jun 2012 08:14 AM PDT
"Rakyat Malaysia harus sedar bahawa ini adalah taktik kotor Umno-BN dalam cubaan untuk membeli MP Pakatan yang telah dipilih oleh rakyat untuk mewakili pihak lain tetapi dengan tawaran jutaan ringgit, mereka akan belot.
"Tetapi ini merupakan satu cubaan yang selama ini telah disebut banyak kali tetapi ini mungkin kali pertama kita dedahkan buktinya," katanya.
"Kalau Umno-BN cuba nak menafikan, kita akan beri mereka peluang sehingga Selasa depan untuk buat kenyataan. Kalau mereka mahu tonton video ini dulu pun, terpulang kepada mereka.
"Tetapi hakikatnya pembelian MP yang dilakukan secara bersungguh-sungguh dengan agen-agen yang mengenalpasti calon untuk lompat parti telah gagal. MP yang ditawarkan dengan duit itu akan tampil memberi keterangan," ujarnya.
Posted: 07 Jun 2012 05:26 AM PDT
Inashort Skype call with Angela, we both exchanged notes about what we had been reading today. Animatedly, I shared with her what I discovered about Bobby Driscoll and other complicated stories from the past after which I sent her the links to those articles I had been reading. Impatiently, I asked her if she had checked those links after which she shared with me the story of the most bizarre murder I had ever read.
Featured in The Daily Mail, this article by Annabel Venning is aboutaMurder in Peking: Pamela Werner, the British envoy's blonde daughter was found murdered. After she was dead, her throat had been slit open withasharp knife. The blood had been drained from her body and her torso cut open and her heart, bladder, kidney and liver extracted.
Initially, her father Edward Werner was initially one of three suspects. Subsequently, investigations were suspended after the Japanese invaded in 1937. Recently, records at the National Archives in London have since helped shed light on the teenager's death. The 75-year old mystery has finally been solved!
Read this very interesting article AT THIS LINK.
Posted: 07 Jun 2012 04:53 AM PDT
ရခိုင်စကားနည်းနည်း တတ်တဲ့ မွတ်စ်လင်မ် မိတ်ဆွေ တစ်ယောက်က ရခိုင်လိုရေးပို့တာပါ။ ရခိုင်စကားပိုတတ်သူများ ပြင်ပေးကြပါ။ အင်း….စဉ်းစားဖြိုက်တဗျာလ်… နက်နက်နဲနဲ မျောပြီးရို့ကေ စဉ်းစားဖြိုက်တာ.. ဒီရက်ပိုင်းမှာ ဖြိုက်သွားတေ့ အဖြိုက်ဆိုးတွေအကြောင်း… … အပြစ်မဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ရခိုင်အမျိုးသမီးချေ သီတာထွီးကို လုယက်မုဒိမ်းကျင့် ရက်ရက်စက်စက်လူမဆန်စွာသတ်ဖြတ်ဂတ်တေ ဖြိုက်ရပ်…. အပြစ်မဲ့တဲ့ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်မြန်မာနိုင်ငံသား ခရီးသွား(၁၀) ဦးကို နေ့ခင်းကြောင်တောင် လူအများကြီးရှေ့မှာ ပက်ပက်စက်စက် သတ်ဖြတ် ဂတ်တေ ဖြိုက်ရပ်…
သနားစရာ သမီးချေ သီတာထွီးသေဆုံးပြီးနောက်ကေ သူ့ရဲ့မိဘတွေက သီတာထွီးရဲ့ ရုပ်ကလာပ်ကို ဝမ်းပမ်းတနည်း ပွေ့ပိုက်ပြီးကေ ကြေကွဲနေရှာ မှာ မြင်ယောင်မိဗျာလ်… စိတ်ထဲလုံးဝမကောင်းပါရေ… အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်မြန်မာနိုင်ငံသားခရီးသွား(၁၀)ဦးရဲ့ ရုပ်အလောင်းတိ ကို ကိုယ်တိုင် မြင်ခွင့်တောင် မရလိုက်စွာတေ သူတို့ရဲ့ မိဘသားသမီးတေရေ ဆောက်တည်ရာမဲ့ အဖြိုက်ကို တွီးမြင်မိပါရေ… စိတ်ထဲလုံးဝမကောင်းပါရေ…. သနားစရာ သမီးချေ သီတာထွီးကို မိဘဆွေမျိုး စုံလင်စွာနိန့်ကေ သာမန် ထက်ပိုပူလောင်တေ့အပူလုံးရင်ထဲဆို့ သဂြိ င်္ုဟ်ဂတ်ကတ်မှာပဲရေ.. အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် မြန်မာနိုင်ငံသား(၁၀)ဦးကို သဂြိ င်္ုဟ်တေ့ အချိန် မှာတောင် အနားရှိနေခွင့် မရဂတ်စွာတေ့ မိဘသားသမီးရေ ရင်ထဲ ဇာ ပိုင်လောက်များ ပူလောင်နေမလဲကေ ခံစားကြည့်မိပါရေ….. ယုတ်မာတေ့အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်မွတ်စလင်မ်သုံးယောက်ကြောင့် သမီးချေ သီတာထွီးရဲ့ မိဘဆွေမျိုးသားချင်းရေ သိပ်ကြီးတေ့ သောက ရင်မှာ ဇာပိုင်လောက်ကြာအောင် ပိုက်ထား ကတ်ရမလဲ? ယုတ်မာတေ့ရခိုင်လူမျိုးအယောက်(၃၀၀)ကြောင့် သေဆုံးဂတ်ကတ်သူ (၁၀) ဦးရဲ့ မိဘဆွေမျိုးသားချင်းရေသိပ်ကြီးတေ့ သောက ရင်မှာ ဇာပိုင်လောက် ကြာအောင် ပိုက်ထား ကတ်ရမလဲ? မျက်လုံးသုံးစုံအောက်မှာ ဘဝပျက်ခဲ့ရစွာတေ့ ရခိုင်သမီးချေလေး…. မျက်လုံးအစုံသုံးရာအောက်မှာ ဘဝပျက်ခဲ့ရစွာတေ့မွတ်စလင်မ် အပြစ်မဲ့ရေ… အော်…လူယုတ်မာရေ…လူယုတ်မာရေ… အများတကာဆဲဆိုရာမှာ မဆီမဆိုင်ပမာပေးခံရတေ့ ခွေးသတ္တဝါတောင်မှကေ မင်းရို့မွတ်စလင်မ် သုံးယောက်နိန့် ရခိုင်သုံးရာလောက် ယုတ်မာမယ် မထင်ဘူးရေ… မင်းရို့ကွာ….. ပထဝီ ပေါ်မှာရပ်ပြီး ပထဝီသားတွေကို စော်ကားယုတ်မာ ရဲ တယ်….မင်းရို့အားလုံးကို ပထဝီမြေကြီး က ဒဏ်ခတ်ပါစေ လို့ ဆန္ဒ မထားရင် ငါလူမပီသနိန်မှာဖြိုက်လို့…..။
Posted: 07 Jun 2012 04:13 AM PDT
Lama betul tak berblog, hampir7bulan blog ni tersadai, bersarang dan berbusut jadinya blog ni, aku rasa sedih betul bila tengok blog ni hampir berkubur, rasanya banyak jugak blog yang tidak berupdate dan terus berkubur, kesian juga bila tgk banyak betul perubahan pada bahagian profile ni, rasa semacam je, macam ni ke profile baru bloggers? haha, tu la dah lama tak nak menaip dan bercerita kat sini, rasa macam janggal je bila berblog balik, ramai yang tanya kenapa blog ni dulu tak boleh bukak, sebab musababnya blog ni kelmarin kene blog, entah kenapa tiba-tiba domain dia hilang, macam ada pencuri siber nak curi domain aku.
Rasanya ni adalah pemulaan untuk aku menulis kembali, banyak cerita dan ceritera yang ingin aku kongsikan pada korang, tapi pelan-pelan lah eh, aku janji akan berblog kembali dan korang support aku ok.....
Ok aku akan update lagi untuk korang semua, salam dari aku untuk korang semua....
Posted: 07 Jun 2012 05:16 AM PDT
Standing L to R . 2/ Lt Ahmad . 2/Lt Musa. 2/Lt Shafie . Lt Yusof Awang Major Nahar Sing Bullah.. Capt Hitam. Lt Tengku Tolha. Lt Zakariah. 2/Lt George Peters.
Sitting L to R : Lt Raja Sahabudin. Major Ng Kong Kee . Kapt Mustaffa Awang . ( SCQ3BIM) Lt Col Tengku Ahmad Shah ibni Sultan Abu Bakar CO 12 (MTA) Brig Gen Tengku Ahmad bin Tengku Besar Burhanuddin COMD3BIM. Maj Abo Marican . Lt Col Asna Sutan ( CO2Recce ) Bt5Camp. Colonel Ariffin ( Mindef ) Lt (QM) Baharuddin Click on image to enlarge.
Posted: 07 Jun 2012 05:34 AM PDT
Posted: 07 Jun 2012 02:23 AM PDT
Yang Berhormat Tan Sri Datuk Seri Panglima Pandikar Amin Haji Mulia
Assalamualaikum w.b.t Tan Sri Datuk Seri Yang di-Pertua,
"Bahawa Dewan ini mendesak agar Kerajaan Malaysia dan Kementerian Pertahanan Malaysia menjelaskan secara terperinci berkenaan dengan isu komisen dan penjualan dokumen rasmi sulit dalm kes Kapal Selam Scorpene.
Pendedahan isu komisen dan penjualan dokumen rasmi sulit Kementerian Pertahanan Malaysia mengenai Kapal Selam Scorpene kepada Syarikat Pertahanan Perancis seperti yang didakwa oleh SUARAM di Bangkok pada 30 Mei 2012 yang dikatakan menggugat keselamatan dan kedaulatan negara."
Suatu dokumen yang sangat sulit iaitu penilaian Tentera Laut Malaysia terhadap Kapal Selam kelas Scorpene yang akan dibeli oleh kerajaan itu didakwa telah "dibeli" oleh sebuah Syarikat Pertahanan Perancis.
Laporan yang didedahkan oleh Peguam Perancis, Joseph Breham, yang mewakili NGO hak asasi manusia, Suaram, mendakwa syarikat berkenaan didakwa membayar 36 juta euro (RM142 juta) kepada Terasasi (Hong Kong) Ltd, dikatakan untuk kerja-kerja "kejuruteraan komersial". Dokumen rahsia tersebut oleh Tentera Laut Malaysia adalah satu penilaian untuk tempahan kapal selam berkenaan, yang merupakan laporan yang sangat sulit.
Pendedahan ini perlu diperjelaskan kepada Dewan Yang Mulia ini dan kepada Rakyat Malaysia betapa seriusnya isu ini lebih-lebih lagi melibatkan Rahsia Pertahanan Negara. Kita tidak mahu rahsia negara boleh digadaikan begitu sahaja demi kepentingan politik sesetengah pihak.
Dalam isu ini, saya menggesa Kerajaan Malayisa menjelaskan secara terperinci peranan Terasasi (Hong Kong) Sdn Bhd yang didakwa menjual rahsia negara kepada syarikat Perancis berhubung urusniaga RM4bilion untuk membeli kapal selam Scorpene.
Dewan Yang Mulia ini juga tidak pernah dimaklumkan berkenaan dengan peranan Terasasi dan juga peranan yang dimainkan Abdul Razak Baginda dalam transaksi yang melibatkan kertas penilaian Scorpene.
Saya memohon agar Dewan yang Mulia membincangkan serta merta perkara ini yang melibatkan rahsia pertahanan Negara dan perkara ini perlu dibahaskan dan diperjelaskan kepada rakyat Malaysia.
Akhir sekali, demi memelihara maruah Malaysia dan rahsia pertahanan Negara, atas perkara yang tertentu ini yang melibatkan kepentingan rakyat umum yang perlu disegerakan, saya mohon usul ini dibahaskan.
S.k Yang Berbahagia Datuk Roosme Binti Hamzah
Posted: 07 Jun 2012 02:08 AM PDT
Two well-dressed ladies happened to start-upaconversation during an endless wait in Brisbane Airport Terminal. The first lady was an arrogant Victorian married toawealthy businessman. The second wasawell-mannered elderly woman from Mount Isa, Queensland.
Afteralittle while, the Victorian woman started by saying, "When my first child was born, my husband builtabeautiful mansion for me."
"My husband sent me to charm school," declared the Mount Isa lady.
The Mount Isa lady responded, "Well as an example... instead of saying, "Who givesaf***?", I learned to say, "Well, isn't that precious?"
Thanks to Saudara Kassim who sent me this post.
ရခိုင်လူ သတ်မှုဖြစ်အောင် အဓိက မှိုင်းတိုက်ပေးခဲ့တာကတော့ ရခိုင်သတင်းဌာန နိရဉ္စရာပါပဲ။
Why release U Wairathu, the Criminal who caused the Anti-Muslim Riots and killing of Muslims. He is the MAIN leader spreading HATE SPEECHES against Muslims and Christians.
The dead body pic was wearing her longyi Thami neatly and tightly. The alleged murders were NOT charge with RAPE but robbery and murder. IF THE RAPE WAS invented to incite hatred, take action on all those CRY RAPE. Even U Wairathu was accusing ALL the Muslims and Religious leader for that.
WHY ALL R from Rakhine and from Gov ADM. It is NOT an independent Commission. Is thisaCOVER-UP Commission?
Call the UN HR Investigator to lead this COMMISSION.
Since 1974 General Ne Win started to call Burma's Muslims as Kala Dein, Kalar, Mi Ma Sitt Pha Ma Sitt, started Racial Profiling. Leter Nagamin lead to expelling Rohingyas. All the following Anti-Muslim Riots should be investigated.
Posted: 07 Jun 2012 01:37 AM PDT
We wish to record that we all are sad about the recent acceleration of Anti-Muslim activities in Myanmar and especially regarding the Buddhist Terrorists killing of innocent Muslims in Taunggoke.
When we look back the political history of Burma or Myanmar; we could notice that radical hardliners from the majority Burmese would conveniently use the Minority Religious Groups as scapegoats to get out of the political quagmire frequently.
At the present time, whole of Myanmar is dosed with the Petrol of Hatred on Muslims of Myanmar and no wonders any accidental or deliberate flick of fire would detonate this kind of explosive response.
Most of the Burmese and Buddhists from both side of political divide could not hide their feelings of deep seated hatred and antagonism toward all the Muslims in Myanmar.
This is because of the repeated HATE CAMPAIGNS by radical hardliners which is never stopped by the successive Myanmar governments. Even US Department of State had mentioned repeatedly in its Human Rights reports in Burma that the copies of the 120 page long, Anti-Muslim booklet which is titled, 'We are afraid that our race will disappear' and "Burmese Citizens Beware!" pamphlets are distributed in most of Myanmar nowadays.
The whole book is written to demonstrate the anti-Muslim sentiment existing in Bamas and the authorities turningablind eye, although realizing that this had lead to very dangerous and disastrous consequences and the pressure in Bama-boiler is increasing daily and it is ready to explode again.
Myanmar Government needs to stop the derogatory name calling Kala, Kalar Dein, Kalar Muslims, Indians, Bengalis, Mixed blooded Indians, Kalar Ka-pyar, Rohingya illegal migrants etc. on its citizens of Islamic Faith. They are committing the Hate crime by Racial Profiling us. All of us are citizens of Myanmar and we must be accorded equal rights.
We hereby wish to request the Malaysian Government, ASEAN and International Community to educate and pressure the Myanmar Government to stop the racial profiling, using the derogatory name calling, stop all kind of Hate Speeches especially the 'We are afraid that our race will disappear' (A Myo Pyauk Hmar Soe Kyauk Par Thee), respect the Human Rights and accord the Equal Rights on all the citizen of Myanmar.
Posted: 07 Jun 2012 02:27 AM PDT
Kuala Lumpur: "Teruskanlah dengan budaya politik seperti ini jika inilah cara Umno ingin mengakhiri hayat mereka," kata Menteri Besar Kelantan, Tuan Guru Datuk Nik Abdul Aziz Nik Mat.
"Saya ditunjukkan dengan muka hadapan akhbar Utusan Malaysia hari ini yang memuatkan demonstrasi NGO pro Umno di hadapan Kota Darulnaim semalam yang membawa kereta tolak dan alat-alat pembinaan, kononnya sebagai 'sumbangan' untuk pembinaan lebuhraya.
"Saya katakan, jika Umno merasakan dengan budaya seperti ini, mereka akan mendapat sokongan, teruskanlah," tulis beliau.
"Kenapa apabila ada rakyat memberikan sumbangan untuk membina masjid dan surau tiada pihak yang mempersoalkan tetapi setelah rakyat membantu kerajaan menyediakan lebuh raya ada yang mempertikaikan dengan anggapan kita mengutip derma.
"Saya yakin Kerajaan Negeri mampu membina lebuh raya tersebut berdasarkan sumber-sumber yang ada dan tidak perlulah pihak lain mempertikaikannya kerana sebenarnya kita mengotakan janji-janji Barisan Nasional (BN) sebelum ini mahu membina lebuh raya," katanya ketika ditemui selepas perasmian Pusat Penerangan Pas di sini, semalam.
Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas tindakan 400 ahli badan bukan kerajaan (NGO) menyertai demonstrasi sukarelawan 'Tukar Acu Test Sepenggal' yang diadakan di perkarangan Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Kelantan (SUK) berhubung pembinaan Lebuh Raya Kota Bharu-Kuala Krai.
Pusat penerangan tersebut dirasmikan Menteri Besar, Datuk Nik Abdul Aziz Nik Mat selepas mempengerusikan mesyuarat bersama wakil rakyat di Jalan Dato' Pati di sini, semalam.
"Rakyat juga sedar pembinaan lebuh raya ini penting kepada mereka dan bukan sahaja digunakan oleh orang Islam sahaja, bahkan semua orang akan menggunakannya terutamanya mengatasi masalah kesesakan," katanya. -SH
Posted: 07 Jun 2012 12:27 AM PDT
Posted: 07 Jun 2012 03:14 AM PDT